ဂမ်လန်ရာဇီ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တည်နေရာ (အိန္ဒိယနှင့် တိဘက် နယ်စပ်အနီး)
၅,၈၇၀ m (၁၉,၂၆၀ ft) 
28°18′21.2″N 97°28′04.6″E﻿ / ﻿28.305889°N 97.467944°E﻿ / 28.305889; 97.467944ကိုဩဒိနိတ်: 28°18′21.2″N 97°28′04.6″E﻿ / ﻿28.305889°N 97.467944°E﻿ / 28.305889; 97.467944 
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၇ တွင် Eric Daft, Mark Fisher, Chris Nance, Andy Tyson, Molly Loomis Tyson (အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ) နှင့် ပြည့်ဖြိုးအောင် (မြန်မာ)
ဂမ်လန်ရာဇီ သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အမြင့်ဆုံးတောင် ဖြစ်နိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ခါကာဘိုရာဇီ အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် တည်ရှိပြီး ဟိမဝန္တာ တောင်တန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်၏။ တောင်သည် မြန်မာနှင့် တိဘက်တို့ နယ်စပ်တွင် တည်ရှိပြီး အိန္ဒိယနှင့် သုံးနိုင်ငံတွေ့ဆုံရာ နေရာမှ ၁၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ၅၈၈၁ ကီလိုမီတာ အမြင့်ရှိသည့် ခါကာဘိုရာဇီ သည် ဂမ်လန်ရာဇီမှ ၆.၆ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ဂမ်လန်ရာဇီသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဆီးနှင်းများနှင့် ရေခဲများ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဂမ်လန်ရာဇီတောင်သည် နှမ်းဖတ်ကျောက် အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အန်ဒီ တိုင်ဆန် (၁၉၆၈–၂၀၁၅) ဦးဆောင်၍ ပထမဆုံး တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့တွင် အမေရိကန် တောင်တက်သမား ငါးဦးနှင့် Technical Climbing Club of Myanmar (TCCM) မှ မြန်မာတောင်တက်သမား နှစ်ဦး ပါဝင်ခဲ့သည်။ တောင်တက်အဖွဲ့ကို ထူးဖောင်ဒေးရှင်း မှ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ တောင်ခြေ အခြေစိုက်စခန်းသို့ ရောက်ရှိရန် မိုးသစ်တောများနှင့် စမ်းချောင်းများစွာကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ ရာသီဥတုကောင်းမွန်နေစဉ်မှာပင် အခြေစိုက်စခန်းသို့ ရောက်ရှိရန် နှစ်ပတ်ခန့် အချိန်ယူရသည်။
အရှေ့တောင်အာရှတွင် အမြင့်ဆုံးတောင် ဖြစ်နိုင်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂမ်လန်ရာဇီ၏ အမြင့်ကို ၅,၈၇၀ ±၂ မီတာ (၁၉,၂၅၉ ပေ) ဟု တိုင်းတာထားသည်။ အမြင့်ကို ဂျီပီအက်စ် ဖြင့် အတိအကျ တိုင်းတာထားမှုအရ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အမြင့်ဆုံးတောင် ဖြစ်သည်။ ခါကာဘိုရာဇီတောင်၏ အမြင့်ကို ဂျီပီအက်စ်ဖြင့် မတိုင်းတာရသေးပေ။ သို့သော်လည်း ထောင်ထိပ်သို့ နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့ခြင်းအရ ခါကာဘိုရာဇီသည် အမြင့်ဆုံးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ တောင်တက်အဖွဲ့သည် ခါကာဘိုရာဇီတောင်၏ ၅၇၄၂ မီတာ (၁၈,၈၄၀ ပေ) အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တောင်ထိပ်သည် နောက်ထပ် ၂၄၀ မီတာ (ပေ ၈၀၀) ခန့် ကျန်နေသေးကြောင်း ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။
↑ ASIAN Geographic No.104 Issue 3/2014 GREAT FORESTS AND MOUNTAINS OF ASIA
↑ ၃.၀ ၃.၁ Andy Tyson, Gamlang Razi. A first ascent in Myanmar's mysterious mountains., The American Alpine Journal, 56, page 45 (2014)
↑ attempt ofateam of The North Face and National Geographic explorers supported byaNGS Expeditions Council Grant to definitively solve the mystery of which is taller။
↑ Khakaborazi National Park။ protectedplanet.net။ 26 March 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 November 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ministry of Agri & Irra under Survey Dept. First Edition: 2008 Myanmar
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂမ်လန်ရာဇီ&oldid=623441" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၁:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။